Ruta del Cares, ethandwa kakhulu enyakatho yeSpain | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Izindawo zokuvakasha, España
Kunabantu abathanda ukuba ngaphandle, bajabulela ilanga nemvelo, futhi ngibashayela ihlombe kakhulu. Leli yikhaya lethu futhi indlela engcono yokufundisa izizukulwane ezintsha ekunakekelweni yilo ngokunembile, ukulazi, ukulihamba, ukuliqaphela nokulihlonipha. Futhi i- ukuhamba ngezinyawo iphelele, yingakho namuhla ingqikithi yethu ithi Umzila Wokunakekela.
Ukuhamba izintaba akudingi amakhono amakhulu, akukhathazi uma umuntu engafuni futhi kuphelele ukwazisa umhlaba osizungezile kuzo zonke izinyathelo. I- enyakatho yeSpain inamathafa amahle, iziqongo zezintaba ezihlangana esibhakabhakeni, futhi nayi iRuta del Cares, umzila odumile ophakathi kwemigodi.
Njengoba sishilo iRuta del Cares umzila odumile, eyaziwa kahle enyakatho yeSpain, okuyi weqa iPicos de Europa phakathi kweLeón ne-Asturias. Okubizwa ngePicos de Europa yizintaba eziyingxenye yezintaba zaseCantabrian nokuthi, yize zingabanzi kakhulu, zigcwele ezingozini zomhlaba ngenxa yokusondela kwazo olwandle. Kungaleso sikhathi-ke ukwakheka kwe-limestone okudlula eLeón, eCantabria nase-Asturias, nokuphakama kwesinye isikhathi okudlula amamitha ayi-2500!
Ukubuyela emzileni, kuyindlela yokufakelwa ukuthi amadoda avulekele ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ukugcina ishaneli lokuphakelwa kwesitshalo segesi seCamarmeña-Poncebos. Lomsele wakhiwa phakathi I-1916 ne-1921 futhi yanwetshwa maphakathi nekhulu lobunzima obukhulu ngenxa yezici zendawo. Nsuku zonke kwakukhona ukuqhuma kwe-dynamite futhi lokho kwathatha izimpilo zabasebenzi abaningana.
Indlela embiwe iyangena amakhilomitha ayishumi nanye enqamula i-Divine Throat of Cares. I-Cares ngumfula omfushane wezintaba, owumfula umfula iDeva nawo ogelezela oLwandle lweCantabrian. Umphimbo wayo uyinto emangalisayo futhi kulapho iRuta del Cares idlula khona, ukweqa imihume namabhuloho. Yize umfula udabula emhosheni isikhathi eside kakhulu kunomgwaqo, le ngxenye eyenziwa ngezinyawo yilokho esikubiza ngokuthi "umzila weCares" futhi udlula endaweni ephakeme ngaphezu komfula uqobo.
Njengoba sishilo ngenhla, imizila eminingi yokuqwala izintaba ayidingi amandla amakhulu futhi lena ngenye yazo. Izinga lobunzima lilinganiselwe, ngakho-ke noma ngubani angakwazi ukuhamba ngayo. I- I-Picos de Europa National Park Ngakho-ke, ivakashelwa ngabantu ababalelwa ezigidini ezimbili minyaka yonke abaza ukwazisa ukuhluka nobuhle bamaphaseji akule ndawo.
Phakathi kwamakhilomitha ayishumi nanye kuya kwayishumi nambili yilokho okufanele uhambe futhi lokho kungathatha phakathi amahora amane ukuya ngakunye futhi kabili uma iya emuva naphambili. Lokho wukuthi, ungakwenza kalula ngosuku olulodwa. Izicathulo ezinethezekile, ukudla, amanzi, isigqoko kanye nesifiso esikhulu sokuhamba konke okudingekayo ukuhlanganisa amadolobha aseCaín, eLeón, nasePoncebos, e-Asturias, emaphethelweni womabili. Noma okuphambene nalokho.
Kungumzila lapho izinja, eziqashisiwe, ziyavunyelwa. Hhayi amabhayisikili angaka ngoba ezinsukwini ezithile kunabantu abaningi futhi, ngokwesibonelo, emhubheni kungaba yingozi futhi kuyacasula. Umzila kumahhala futhi kumahhala kepha kukhona izinkambo ezihlelwe ngemihlahlandlela yochwepheshe ongazisebenzisa.
IRuta del Cares nayo ingenziwa ebusika ngoba uma ungena usuka ePoncebos lapha cishe alikho iqhwa ngenxa yendawo ephakeme. Vele, uma ungena ngeCaín akulula kangako ngoba uma likhithika akunakwenzeka. Ukuhlangana: Kungcono ukuthi ungayi ebusika.
Uhambo oluqondiswayo oluvela ePoncebos luvame ukusuka phakathi kuka-8 no-9 ekuseni. Yimaphi ama-landscapes amahle owabona lapha? Well udabula i- umhosha omuhle, eneziteshi ezibheke mpo nezindonga, Umbono wePanderrueda, lo I-Posada de Valdeón neCordiñanes, Esigodini SaseValdeón, i- INtaba iCorona lapho ungabona khona i- IChorco de los Lobos (isitokfela esidala esakhiwa ukuzingela lezi zilwane), futhi ekugcineni komgwaqo uzobe usufikile kuKhayini.
Kusuka kuKhayini iRuta del Cares yenziwa kolunye uhlangothi. Udlula edamini bese indlela ingena eGorge ngokusebenzisa imigudu yokuhambisa amanzi. Udlula ibhuloho iTrascámara, uwelele kolunye uhlangothi lomfula bese uqala ukukhuphuka, ungena endaweni evalwe kakhulu yomgwaqo futhi ngenxa yaleso sizathu umangalisa ngokwengeziwe. I- IBolín Bridge, uhambo luyaqhubeka Izikhali kanye namaPárvula, udlula ezakhiweni ezimbalwa ezindala bese ufinyelela amamitha ayi-200 wokuphakama ungene AmaCollados.
Lapha umuntu unenketho yokuthatha enye indlela eya eCamarmeña kusuka lapho ungabona khona iNaranjo de Bulnes. Mhlawumbe kuwufanele uma ungakhathali, ngoba leli ukuphela kwephuzu kuyo yonke iGarganta del Cares lapho ibonakala khona. Uma kungenjalo, udlula ePuente de la Jaya futhi ekugcineni ufinyelela indlela ye- IPoncebos Bridge.
Okunye ukucaciswa kufanelekile: INaranjo iyisiqongo esinezinto ezinesilinganiso esakhiwa ngesikhathi sePaleozoic, i- Umbono Womthombo Womthandazo Kungumbono omuhle owenziwe ngumdwebi wezakhiwo uJulián Delgado Úbeda; I-El Chorco de los Lobos iyisitoko esincanyana esiya ngokucinana esiphelela emseleni futhi sinezindawo zokuqapha lapho omakhelwane bebefihla khona badubule izimpisi, phambilini, ezazisongela omakhelwane nemfuyo.
Sesishilo lokho umzila omuhle. Kubiza kancane ukuqala, lapho ushiya iPoncebos futhi ngamakhilomitha amabili, okuyilapho ithola khona ukuphakama, kepha akunjalo futhi uma umzila usunqotshiwe ngokungangabazeki uyathandeka. Imitha elilodwa nohhafu ububanzi kwazise yayenzelwe ukuthi kudlule imoto. Yebo kunjalo, azikho izivikelo ohlangothini lwethambeka ngakho-ke kufanele uqaphele. Uzokubona lokho kunemigudu eminingi, njalo ulethe amanzi nesigqoko, ikakhulukazi ehlobo.
Ngakho-ke, lapho wenza iRuta del Cares kufanele ucabange kuphela ngosuku, ukuthi uzothathani nokuthi uzoqala nini ukuhamba ngalo. Futhi ukujabulela!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Ruta del Cares, ethandwa kakhulu enyakatho yeSpain
Yini ongayibona eBarcelona ezinsukwini ezintathu